Ziziphi iiNkcazo zeCompound?
Amagama amabini afundayo njengeMnye
Ngegrama yesiNgesi , isibizo sesiqhelo (okanye isakhiwo samagama) sakhiwo sakhiwa ngamagama amabini okanye ngaphezulu asebenza njengegama elilodwa. Ngeemigaqo yokupelisa ngokungabonakaliyo, izibizo zengqungquthela zingabhalwa njengamazwi ahlukileyo njengentambo yetamatato, njengamazwi axhunyaniswa ngongoma-mkhwenkwe njengomkhwekazi okanye njengelinye igama elifana nomfundisi.
Isibizo sesiqulatho esinegama elingasabonakali ngokucacileyo imvelaphi yalo, njengobhondi okanye i-marshall, ngamanye amaxesha kuthiwa lihlanganisiwe; Amagama amaninzi kwindawo (okanye i- toponyms ) zidibanisa izixhobo - umzekelo, iNorwich inxulumene "nomntla" kunye "nelali" ngelixa uSussex udibanisa "ngasezantsi" kunye ne "Saxons."
Enye into ebangel 'inkoliso yamaninzi amaqhina amagama kukuba enye yegama elivela kwimvelaphi liphezulu. Eli gama, elibizwa ngokuba ligama lekhanda, libeka igama njengegama, njengegama elithi "sihlalo" kwisibizo sesiqingqiweyo "silula."
Umsebenzi weeNkcukacha zeNkampani
Ukudala igama lesiqulatho, okanye ukudibanisa, ngokutshintshileyo utshintshe intsingiselo yeengxenye zamagama amatsha, ngokuqhelekileyo njengesiphumo sokusetyenziswa kwazo. Thatha ngokuphindaphindiweyo igama elithi "i-easychair" apho isichazizwi "lula" sichaza isibizo njengokuba singenazinzima okanye ukhululekile kwaye "usihlalo" sithetha indawo yokuhlala - igama elitsha elidibeneyo lithetha indawo ekhululekile yokuhlala .
Kulo mzekelo, kwakhona, uhlobo lwegama elinguqulelo olulula ukusuka kwisichazizwi kwisibizo, esekelwe kwinxalenye yentetho igama lekhanda (isihlalo) imisebenzi. Oku kuthetha ukuba ngokungafani nesigama-nesibini-magama-magama-magama, isibizo sesiqulatho senza umsebenzi ohlukileyo kunye nenjongo epheleleyo kwisigwebo.
UJames J. Hurford usebenzisa umqhubi wecandelo lomqhubi weetrakta xa kuthelekiswa nesichazi-magama-nesibini ibinzana elingenazintluli umqhubi ukugxininisa umahluko phakathi kwezi zibini ezisebenzisayo kwi-"Grammar: A Guide Students". Umqhubi ongenamdla, uthi, "akhathazeki kwaye ungumqhubi, ngelixa umqhubi weetrakta ngumqhubi kodwa ngokuqinisekileyo akayikho itektare!"
Imithetho ekhethekileyo yokuSebenza
Njengoko uRonald Carter noMichael McCarthy babebeka "kwiCambridge Grammar yesiNgesi," isakhiwo sesibizo segama lesiqhelo "sichaphazeleka kakhulu kwiintlobo zentsebenziswano enokuthi ibonisa ukuba," kwinto enokuthi injengebhasikidi yephepha-nkunkuma kwinto ethile ezenziwe njenge-woodpile okanye i-metal slab, indlela into esebenza ngayo njenge-oven convection kulokho umntu enokuthanda utitshala wolwimi.
Ngenxa yoko, imithetho yokusebenzisa yonke into esuka kwiziphumlisi ukuya kwi-capitalism ingadideka, ngakumbi abafundi abatsha begrama. Ngethamsanqa, kukho izikhokelo ezimbalwa ezisekelwe kwimibandela eqhelekileyo enxulumene nale ngxaki.
Ngokomzekelo, uhlobo oluthile lwezibizo eziqingqiweyo, njengoko uStewart Clark noGraham Pointon bachaza "kwiNkqubo yokuBala abafundi beSiNgisi," kufuneka uhlale ubeka i-apostrophe ngesiqulatho emva kwegama elithi "yonke igama" Igama lentloko le binzana: I-dolophu yenja yaseLondon (inja ingowokuMeya, kungekhona eLondon). "
Ngokomgaqo-mali, umgaqo wokubaluleka usebenza kwiifom ezininzi zeefom. Nangona mzekelo kaClak and Pointon, boMasipala kunye noMongameli banomxholo kwisibizo sesiqulatho kuba ibinzana ngokwalo libizo elifanelekileyo.
Uluphi ulwimi lwePejorative?
I-Order Order in Composition
I-Islam View View Punishment Capital
Indlela yokuvelisa amaNombolo angamaRandi
Yonke Isichotho Iimbuzi!
Imbali ye-US Federal Income Tax
Imbali ye-Post Office Technology
I-10 ephezulu ye-Alfred Hitchcock Comedy Movies
Iibhendi zakho ezizithandayo kwiNdwendwe ngo-2016
Iimpawu zeCandelo elisebenzayo
IsiGama esiPhambili kwiincwadi ze-Teaching ESL
Ukwandisa izivakalisi ezineziphumo kunye neengcebiso
UkuQala ngokuPhumela kweMigangatho yokuPhathwa kweMigangatho yokuQala
Yiyiphi Inokwenzeka Yokukhetha Ngokukhawuleza Inombolo?
Ifa likaHu Jintao